သက်ဝေ: မနော် Tag တဲ့ ခုတလော...
မောင်မျိုး March 18, 2013 at 3:36 PM
ရေးတော့ရေးချင်တယ် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြန်တွေးလိုက်တော့ မောစရာကြီးး အားဆေးသောက်ပြီးမှရေးတော့မယ်ဗျာား))
chocothazin March 18, 2013 at 5:08 PM
jack in the box လေးချစ်တယ်။
ရွှေအိမ်စည် March 18, 2013 at 7:29 PM
ကြိတ်ပြီး အထင်သေးမိတာ တူတယ်
ဇွန်မိုးစက် March 18, 2013 at 11:10 PM
ခုတလော... ဒူးပြန်နာနေလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်...မမ။း(
စကားမစပ်... နှင်းဆီဖြူလေးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်...း)
မိုးငွေ့........ March 19, 2013 at 2:21 PM
ရေးမယ် မမသက်ဝေ... မရေးကြတာကြာပြီနော် တဂ်ပို့စ်ကို... ဘလော့ကို အရင်လို စည်စည်ကားကားလေးပြန်ဖြစ်စေချင်တာ...
အကျီတံဆိပ်ကို ဘယ်သူက လာလာလှန်ကြည်.တာလဲဟင်။ အဲ.လိုဘဲကြည်.ကြလား။
ညီလင်းသစ် March 19, 2013 at 9:41 PM
တမ်းတမိတာချင်းတော့ တူနေပြီ အစ်မသက်ဝေ..၊း)
ပြီးတော့ ထုံပေပေ ဖြစ်သွားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ချီးကျူးခွင့်၊ ပြန် အထင်သေးခွင့်လည်း ရချင်တယ်..။းD
မြသွေးနီ March 20, 2013 at 2:59 PM
ဖဘမှာဖတ်ပြီးပေမယ် နောက်တကြော့ ပြန်ဖတ်သွားတယ်အစ်မသက်ဝေ.. တစ်ခါတစ်လေ အဲ့ဒီလို မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေလိုက်ရတာလည်း စိတ်ထဲက မပြောဖြစ်တာလေးတွေ ပြလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ရေးရတာလဲ အရသာရှိ၊ ဖတ်ရတာလည်း အရသာရှိတယ်နော်..။
ဆုမြတ်မိုး March 20, 2013 at 4:58 PM
ကိုယ့်ဘာကိုယ်တက်ခ်ပြီး ရေးလိုက်ပါပြီ တီသက်ရဲ..း)
Kay Thwel March 20, 2013 at 10:06 PM
အရုပ်တွေနဲ့ ဆော့တုန်းပဲကိုး..။ ခုမှ ပြန်ဆော့တာ ဖြစ်မယ်။း)
Ma Tint March 21, 2013 at 12:55 AM
ရေးထားတာလေးတွေ သဘောကျတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိတ်ပြီးချီးကျူးတာလေးဖတ်ပြီး ကြိတ်ပြီး ရယ်မောသွားတယ် :P
မသက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးနဲ့ ရေးထားတာလေးတွေ ထပ်တူထပ်မျှကျပါပေတယ် :) မသက်ကို သတိရတိုင်းလည်း 'ကျေးဇူးတင်မြဲပါ'
သက်ဝေ March 21, 2013 at 8:42 AM
မောင်မျိုး... ရေးပါ ရေးပါ... အားဆေးသောက်ပြီးရင် ရေးပါ...
ညီမ သဇင်... ဒီတခါ အိမ်လာလည်ရင် ပေးဆော့မယ်...း-)
ညီမ သူသူ... သိနေတယ်လေ... တူ ဆို ညီအမတွေပဲ ဟုတ်...
ညီမ ဇွန်... စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့.. ဒူးနာတာ အဲလိုပဲ အရှင်း ပျောက်ဖို့ ခက်တယ်... ဂရုစိုက်ပါ ညီမ...
ညီမ မိုးငွေ့လေး... ရေးနော်.. အမ လာဖတ်မယ်... ဘလော့ဂ်တွေ စည်စည်ကားကား ပြန်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ကြတာပေါ့...း-)
သက်ဝေ March 21, 2013 at 8:49 AM
Anonymous... မယုံမရှိနဲ့.. အဲလိုလူစားတွေ အများကြီးရယ်....းD :D
ကိုညီလင်း... အဟုတ်ပဲ... အိပ်ရေးမ၀တဲ့ ညတွေ သိပ်များတယ်... ကော်ဖီကို လျှော့သောက်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားတာပဲ...
ညီမ မြသွေးရေ... ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆိုပေမယ့် ရေးရင်းနဲ့ လေးလံလာပြန်လို့ တချို့နေရာတွေ ဖြုတ်ခဲ့ရတယ်... ထုံပေပေနဲ့ပေါ့... အဟိ
ညီမ ဆုမြတ်... လာဖတ်မယ်... <3
ညီမ ကေ... သများကို သူငယ်ပြန်သူ ဖြစ်သွားအောင် ပြောတယ်... ဗြဲ......... စာအုပ်မှာ လက်မှတ်မပါလို့ သိပ်ကျေနပ်တာ မဟုတ်ဖူးနော်... ဒါပဲ...
အန်တီတင့်ရေ... အမြဲသတိရနေပါတယ်... ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေနော်...
စာမရေးတာ ကြာ... ဘလော့ဂ်တွေ ခြောက်သွေ့နေချိန်မှာ မနော်ကျေးဇူးနဲ့ ရေးဖြစ်တဲ့ Tag Post လေးကို လာဖတ်သူများနဲ့ ကော်မန့်ရေးခဲ့ကြသူများ၊ Tag post ကို လက်ဆင့်ကမ်း ရေးပေးမယ့်သူများ အားလုံးကို ချစ်ခင်စွာနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ponyate March 22, 2013 at 11:06 AM
ဂျိတ်ပိတ်။ ပုံရိပ်လည်း နှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖတ်ဖြစ်တယ်။
Hmoo March 23, 2013 at 9:50 PM
Hmoo March 28, 2013 at 8:08 AM
:) ကောင်းကောင်းမောင်းတတ်ရင်တကျပ်ဆုချမယ် :)
တန်ခူး April 4, 2013 at 7:58 AM
ကိုယ်ကျန်းမာရေးကောင်းနေတာကိုက ကံအကောင်းဆုံးပေါ့သက်ဝေရယ်. ဒီပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး ဆုတောင်းပေးပါတယ်. ရေလိုအေးလို့ ပန်းလိုချမ်းမြေ့ပါစေလို့ 